Muxuu Macallimuu ka yiri xilki shalay loo magacabay? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu Macallimuu ka yiri xilki shalay loo magacabay?
Muxuu Macallimuu ka yiri xilki shalay loo magacabay?
Muqdisho (Caasimada Online) – Maxamed Ibraahim Macallimuu oo uu shalay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay afhayeenka xukuumadda federaalka ayaa ka hadlay xilkaasi cusub ee loo magacaabay, kadib war qoraal ah oo uu maanta soo saaray.
Macallimuu oo ka mid ahaa bahda warbaahinta dalka, sidoo kalena ahaa xoghayaha guud ee ururka isutaga Saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ ayaa soo dhoweeyey xilkaas loo magacaabay, isaga oo marka hore u mahadceliyey R/wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in saxaafadda iyo siyaasadda aysan kala fogeyn, islamarkaana uu ka shaqeyn doono waajibaadka shaqada loo igmaday.
“Saxaafadda iyo siyaasadda kalama foga oo jaamacadaha qaar sanadaha hore wey isla socdaan, suxufiyiin badan ayaa ugu dambeyn ku dhamaada siyaasadda, aniguna ka mid baan noqday,” ayuu yiri Maxamed Ibraahim Macallimuu.
Ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay dhammaan Ummadda Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo danta guud ee dadka Soomaaliyeed.